Iindaba-Uthini umgaqo-siseko wokusebenza kwefilitha?
Uthini umgaqo wokusebenza wokucoca ulwelo?
Icebo lokucoca ulwelo luhlobo nje lomatshini, olwenza ukuhluza kunye nokwahlula ngexesha lokusebenza kwalo.
Uhlobo lweCofa lokucoca: iPlate kunye neSakhelo seFilitha yokuCoca, iCandelo lokuCoca iCandelo, Umatshini wokucoca ulwelwesi, njl.
1.Ngaphambi kokuvula uhlolo lokujonga ukuba icwecwe lokucoca ulungelelwaniso kwaye ilaphu lokucoca licocekile kwaye licocekile. Ukuba ilaphu lokucoca alicocekanga, liyakuchaphazela ukungena kwamanzi kwilaphu lokucoca ulwelo, kwaye ekugqibeleni liyakwandisa ixesha lokucinezelwa kwendle, kwaye umxholo wamanzi uya kuba phezulu kunexabiso eliqhelekileyo. Ukuba ilaphu lokucoca alilungiswanga kakuhle okanye lishwabene, liya kutshizwa likhutshwe ngaphandle komsantsa emva kokunyuka koxinzelelo lodaka.
2. Qala ngokucinezela udaka
Icwecwe lokucoca ulwelo vula icompressor kumatshini wokucoca ulwelo, cinezela icwecwe lokucoca ulwelo, kwaye ugcine uxinzelelo ku-25kfg / cm2.
B. Vula impompo yodaka kwaye wondle udaka kwisitya kunye nesakhelo sokucoca ulwelo. Emva kokuba udaka lungene kumatshini wokucoca ulwelo, phantsi koxinzelelo oluqinisekileyo, amanzi agqitha kwisithuba selaphu lokucoca, atshone kumbhobho wefiltrate, angene kwintloko yomthombo ecaleni kwesixhobo sokucoca ulwelo, kwaye ahambe aye kwitanki yokubonisa. Njengokuba inani lodaka lonyuka, iipore ziyancipha zize zinciphe, kunye noxinzelelo lokuhluza luyonyuka. Xa uxinzelelo lodaka lufikelela kwi-5kfg / cm2, umxholo wobumdaka obumalunga ne-70%, kunye nekhekhe lokucoca ulwelo. Xa uxinzelelo lwandisiwe laya kwi-4kfg / cm2, impompo yoxinzelelo ivulwa kwaye uxinzelelo olukhulu kakhulu. Xa uxinzelelo lincinci kakhulu, ivalve yoxinzelelo yoxinzelelo ivulwa ukuthintela uxinzelelo olugqithisileyo kwimpompo yokujija.
A. Vula isakhelo kwaye ukothule udaka Kuqala, qala ucofe isihluzi ukwenza isenzo sokucinezelwa, emva koko ukhulule ikhampasi yokubamba uxinzelelo, emva koko ukhulule ipleyiti, utsale ipleyiti uyivule, emva koko ucofe udaka phantsi kunye netrowel kwaye ulahle ukuya ezantsi kwengxowa.
B. Cwangcisa kwakhona, uxinzelelo lodaka Xa elona ludaka lupakishwe, inyathelo loxinzelelo liqalisiwe. Emva kokucinezela, uxinzelelo lugcinwa kwi-25kfg / cm2. Emva kokuqinisa ikhampasi yokugcina uxinzelelo, cofa ukuze umise isenzo emva koko ucofe ukuvala.
4. Buyisela ilaphu lokucoca ulwelo Xa ilaphu lokucoca lincamathele kwiglu, alinakususwa sisicoceko soxinzelelo oluphezulu, okanye ilaphu lokucoca ulonakalisile, ilaphu lokucoca ulwelo kufuneka lithathelwe indawo kwangoko.
A. Susa ilaphu lokucoca elidala Susa ipleyiti yokucoca, ukhulule intambo elungisa ilaphu lokucoca ulwelo, ususe ilaphu lokucoca ulwelo, kwaye wenze nkunkuma eqinileyo.
Faka endaweni yelaphu elitsha lokucoca ulidlulise kwilaphu elitsha lokucoca uligqobhoze kumngxunya osembindini wesitya sokucoca ulwelo, ujikelezise ilaphu lokucoca ulwelo, kwaye ubeke isiphelo somngxunya wentambo ongashukumiyo ezantsi, emva koko usebenzise intambo ukudlula ngokuhambelanayo imingxunya yamalaphu amabini okucoca ulwelo, kwaye ulungise amalaphu amabini okucoca kwisihluzi. Ebhodini.
C. Beka amacwecwe okucoca ulwelo ngokufanelekileyo. Beka amacwecwe okucoca ulusu ngelaphu lokucoca ulwelo kwaye ucwangcise ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Emva kokutshintshwa, udaka lunokucinezelwa ngokwesiqhelo.